Fijoroan’ny Antenimiera vaovao :: Niresaka momba ny fanovàna ny governemanta ny Filoham-pirenena • AoRaha
Fijoroan’ny Antenimiera vaovao Niresaka momba ny fanovàna ny governemanta ny Filoham-pirenena
Be ankamantatra tokoa ! “Aorian’ny fanendrena ny praiminisitra, dia hojerena ny momba ny governemanta”, hoy ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, taorian’ny fitokanana an’ilay tanàna kely filamatra, tetsy Ankorondrano, omaly. Novalian’ny Filoha tamin’ny ampahany, araka izany, ny fanontaniana mipe­traka momba fanovàna na fandravana ny governemanta, tarihin’ny Praiminisitra, Ntsay Christian, taorian’ny fivoahan’ny vokatra ofisialin’ny fifidianana solombavam­bahoaka sy ny fijoroan’ny
Tahaka ny efa mivonona amin’ny fanajàna ny andininy faha-54 ao amin’ny Lalàm-panorenana, izay manome fahefana ny antoko na
vondrona antoko politika maro an’isa, eny amin’ny Antenimierampirenena, hanolotra anarana praiminisitra, ny tenany. Ny Filohan’ny Repoblika ihany no manam-pahefana hanendry ny lehiben’ ny governemanta ao anatin’ izao Repoblika faha-IV izao.
Hiankina manontolo amin’izay ho fifanarahana na fanapahan-kevitra iraisana eo amin’ny Filoham-pirenena sy ireo solombavambahoaka maro an’isa ao anatin’ny vondrona politika miara-dia amin’i Andry Rajoelina (IRD) io fanendrena ny praiminisitra io.
Hiankina amin’izay ihany koa ny momba ny fandravana ny governemanta ankehitriny na tsia, ary kisarisary tokony hitarika amin’ny fametraham-pialan’ny governemanta am-perinasa. Tsy mbola fantatra kosa na mbola ho voatazona eo amin’ny toerany ny Praiminisitra Ntsay Christian na tsia. “Tsy maintsy hirosoana ny fanaovana tomban’ezaka amin’ny asa vitan’ireo minisitra ao anatin’ny governemanta. Ho jerena hoe inona no tsy mety, inona no mila hatsa­raina? Resaka fitantanana no resahina”, hoy ny Filoha. Ninia tsy niteny mikasika an’ izay mety ho endrikendriky ny fanovàna hotanterahany na tsia amin’ny governemanta kosa ny Filoha Rajoelina Andry.
Nambaran’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina sady mpitondra tenin’ny governemanta , Rakotondrazafy Lalatiana omaly, fa: “tsy voatery hisy ny fametraham-pialan’ny governemanta”. “Tsy misy lalàna mamaritra an’izany, fa miankina amin’izay fanapahan-kevitry ny Filohan’ny Repoblika sy ireo solombavambahoaka ny fandravana na fanovàna ny governemanta.Tsy midika ho fibodoan-toerana akory izany”, hoy ihany izy.
Fivoriana amin’ny 16 jolay
Nivoaka nandritra ny Filankevitry ny minisitra, afak’omaly, ny didim-panjakana miantso an’ireo solombavambahoaka hanatanteraka ny fivoriana voalohany eny amin’ny Antenimierampirenena, eny Tsimbazaza. Ny talata 16 jolay ho avy izao no daty voatondro hanaovana an’io fivoriana io. Ny fananganana ny Birao maharitra miaraka amin’ny fifidianana an’ireo mpikambana handrafitra izany no lahadinika tanteraka manomboka amin’io talata 16 jolay io, fa tsy ny 9 jolay araka ny feo nandeha afak’omaly.